Varotra sy varotra: ny lalao seza fiandrianana tany am-boalohany | Martech Zone
Ity dia infographic lehibe iray avy amin'ny ekipa Pardot momba ireo fikambanana izay mitolona amin'ny varotra sy ny varotra mba hampifanaraka ny tenany. Mitovy amin'ny consultant marketing, niady tamin'ny orinasan'ny varotra ihany koa izahay. Ny olana lehibe iray dia ny fikambanan'ireo mpivarotra am-barotra matetika mampihatra ny zavatra antenain'izy ireo amin'ny ekipa mpivarotra amin'ny ekipa marketing.
Izahay dia nokaramain'ny orinasam-barotra, satria fantatr'izy ireo fa tsy nanangana fahatsiarovan-tena, fahefana ary fahatokisana an-tserasera ny marik'izy ireo ary ny ekipan'izy ireo mivarotra dia noravan'ireo mpifaninana manao izany. Fa avy eo rehefa vita ny fampiasam-bola amin'ny fananganana izany fahatsiarovan-tena, fahefana ary fahatokisana izany - manomboka mitabataba kely ny kalitaon'ny firaka, ny habetsahan'ny firaka, ny hafainganan'ny faran'izay akaiky, ary ny lanjan'ilay fifamatorana. Tena antenaina hafahafa ny fampiharana ao anatin'ny fotoana fohy. Tianay ny handrefy ny tanjaky ny resaka marketing.
Tianay antoka fa, amin'ny paikady marketing lehibe, dia manohy mampitombo ny fahatsiarovan-tenanay, manangana fahefana ary mahazo fahatokisana izahay. Amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny orinasam-pivarotana dia tianay ny hahazoana antoka fa mamokatra sakamalaho mahitsy izahay izay hanampy ny mpivarotra hanidy ny varotra. Rehefa mandeha ny fotoana dia te-hivoatra ny kalitaon'ny firamainty isika, hitombo ny habetsahan'ny firaka, ny vidiny isaky ny firaka, hampitombo ny hafainganan'ny akaiky sy ny lanjan'ilay fifamatorana Tokony hitandrina izany mandritra ny fotoana maharitra isika… volana sy taona maro fa tsy ho avy eo.
Miaraka amin'ny tanjona, antony manosika ary fitaovana samihafa, ny fampifanarahana ireo departementan'ny varotra sy ny varotra ataon'ny orinasanao dia mety ho fanamby isan'andro. Isaky ny ekipa tsirairay mametraka ny takian'izy ireo amin'ny faritra samihafa amin'ny fizotry ny asa, dia mety ho sarotra ny mahita marimaritra iraisana hampiarahana azy ireo. Na izany aza, rehefa miara-miasa ny varotra sy ny marketing mba hitarika fitarihana, hikolokoloana ny fifandraisana ary ny fifanarahana akaiky, dia afaka miroborobo ny orinasa iray. Matt Wesson, Pardot.
Sarotra kokoa ny fanoratana. Tsy mino aho fa ny varotra rehetra dia tokony homena fotsiny na. Ny olona varotrao dia tokony ho afaka handroso ary hisaotra ny ekipa mpivarotra tamin'ny fampahalalana sy ny fitarihana ny lohalaharana mankany akaiky. Ny ekipan'ny varotrao dia tokony ho afaka hanome fandinihana ankapobeny momba ny fanampiana ny ezaka ataon'izy ireo amin'ny solontenan'ny varotra. Izany no antony ankasitrahako ny famaranana an'ity sary ity - manondro Ahoana no automatisation marketing - miaraka amin'i mitarika grady / isa, mitarika fikarakarana ary tatitra dia hanampy ny ekipa mpivarotra ary hitarika ny ekipa mpivarotra hanatsara ny paikadin'ny fahazoana ankapobeny.
Pejy fandraisana: Amin'ny maha miaramila miaramila ahy dia apetrako amin'ireo pejy fandraisana sy fomba fiasa mialoha ny Twitter ny CMS ahy ary na dia ny Adwords aza. Ny atiny (miaraka amin'ny marika efa niorina) dia tokony ho fototry ny paikady marketing miditra rehetra.
Tags: Game of thronesfitarihana fitarihanamitarika fikarakaranafitaterana firakascoring firakaantony manosika marketingmarketing toolspardotolana amin'ny marketingolana amin'ny varotravarotra sy marketingantony manosika ny varotrafivarotana fitaovanavarotra mifanohitra amin'ny marketing
Ny tabilao marketing amin'ny atiny